Ra’iisul wasaare Saacid oo soo dhamaystiray Golaha Xukuumadiisa
Home Somali News Somali Government Ra’iisul wasaare Saacid oo soo dhamaystiray Golaha Xukuumadiisa
Dhamaystirka Gollaha wasiirada ayaa ahayd mid aad loo sugayay oo laga war dhowrayay Xfiiska RW Soomaaliya, waxaana jiray kulamo iyo latashiyo soconayay mudo ku dhow bil, taasoo lagu magacaabayay Xubnahan maanta magacooda lashaaciyay.
Liiskan Gollaha wasiirada ayaa micnihiisa waxa uu yahay in guud ahaan Xukuumaddii lasoo dhamaystiray, Liiksa waxa uu ka koobanyahay 5 wasiiro doowladeed iyo 20 wasiiro kuxigeen, waxaana wasaaradaha oo 10 wasaaradood ah middiiba ay leedahay miin 2 wasiiro-kuxigeen.
Magacyada Liiska Wasiirada lamagacaabay:
1-Cabdi Faarax C/qaadir W/dowlaha Madaxtooyada.
2-Dr Maxamed Nuur Gacal W/dowlaha arrimaha dibada
3-Mahdi Maxamuud Cali W/dowlaha arrimaha gudaha
4-Maxamed Rashiid Sheekh Daahir W/Dowlaha Maaliyada
5-Maxamuud Ismaaciil Barqadle W/Dowlaha Horumarinta Iyo Adeega Bulshada
Magacyada 20ka Wasiir kuxigeen
1-Eng maxamed Aadan Axmed W/kuxigeenka arrimaha Dibada
2 Jamaal Axmed Barrow W/ ku xigeenka arrimaha dibada
3 Xasan Ibraahim Maxamed W/ku xigen arrimaha gudaha
4 Jaamac Axmed Maxamed W/ku xigen arrimaha gudaha
5 Maxamed Xasan Aadan W/ku xigen maaliyada
6 Abuukar Xasan Cali W/ku xigen maaliyada
7 Bashiir Maxamed jaamac W/ ku xigeenka horumarinta
8 Maxamuud Macalin Yaxye W/ku xigeenka hormarinta
9 Fahmo Axmed Nuur W/ku xigen cadaalada
10 Xasan Maxamed Jimcaale W/ku xigeenka cadalada
11 Nadiifo Maxamed Cusmaan W/ku xigeenka howlaha guud
12 Cali Shekh Maxamed W/ku xigeenka howlaha guud iyo gaadiika
13 Siciido Xasan Cusmaan W/ku xigeenka Qeyraadka
14 C/raxmaan Maxamed Geedi W/ku xigeenka Qeyraadka
15 Axmed Maxamed Maxamuud W/ku xigeenka gaashaandhiga.
16 C/raxman kulmiye Xirsi W/ku xigeenka Gaasgaandhiga
17 C/qadir Sheekh Ismaacil W/ ku xigeenka Ganacsiga
18 Maxamed Cali Xagaa W/ku xigeenka Ganacsiga
19 C/shakuur Cali Mire wasiir ku xigeenka warfaafinta
20 Ibraahim Isaaq Yaroow wasiir ku xigeenka warfaafinta.
Marka laysku daro liiska golaha wasiirada guud ahaan waxay noqonayaan ilaa 35 wasaaradood waana Xukuumadii ugu Koobneed marka loo fiiriyo doowladihii KMG ahaa ee Soomaaliya loo soo dhiso tan iyo burburkii.
Gollahan wasiirada lamagacaabay oo isugu jira wasiiru-dowlayaal iyo wasiiro ku xigeeno ayaa micnaheedu waxa uu yahay in doowlada hadda lasoo dhamaystiray, iyadoo uu jiro murano aad u farabadan oo qaar kamid ah beellaha Soomaaliyeed ay wax tabanayaan, hase ahaatee ay hadda u muuqaneeyso in wasiiradii lasoo kaabay.